Kooxaha Burcad Badeeda Soomalida oo Laga Badbaadiy Markab – Balcad.com Teyteyleey
By Abdi Malik	 On Oct 7, 2017
Maraakiibta dagaalka ee ciidamada badda ee INS Trishul ayaa fashilay isku day afduub oo kooxaha Burcad Badeeda Soomalida ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan Markab-ka MV Jag Amar oo laga leeyahay dalka Hindiya oo marayay Gacanka Cadmeed.
Weerarkaan ayaa la sheegay in kooxaha Burcad Badeeda Soomalida ay geysteen saacadu markay ahayd 12:30 pm shalay oo jimco aheyd.
Afhayeenka ciidamada badda Capt D K Sharma ayaa sheegay in Ciidamo badan ay u gurmadeen markabka la weeraray islamarkaana haatan ay bad qabaan 26-shaqaale oo Hindiyaan ah kuwaasi oo saarnaa Markabka.
Sidoo kale Afhayeenka ciidamada badda Capt D K Sharma wuxuu sheegay in gacanta lagu dhigay AK47, hal joornaal oo leh 27 wareeg, qoryaha, xadhkaha, dab damiyaasha iyo jaranjarooyinka intii lagu jiray hawlgalka.
Ciidamada Bada ee Hindiya ayaa si firfircoon ugu hawlan howlaha la dagaallanka burcad-badeednimada ee gacanka cadmeed, oo ah maraakiibta muhiimka u ah maraakiibta u dhow xeebta koonfureed ee Badda Cas ee Soomaaliya iyo Yemen.
Bishii Abril, Dowladaha Hindiya iyo Shiinaha ayaa badbaadiyay markab ganacsi oo marayay Gacanka Cadmeed kadib markii ay afduubteen burcadbadeeda Soomaaliyeed.
The post Kooxaha Burcad Badeeda Soomalida oo Laga Badbaadiy Markab appeared first on Ilwareed Online.